पुरानो नियमका - मीका 2
मानिसहरुमाथि यस्तो बिपत्ति आइपर्नेछ, जो पापपूर्ण योजनाहरु बनाउँछन्। यस्ता मानिसहरु ओछ्यानमा सुति-सुति षड्यन्त्र रच्दछन्, अनि बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै आफ्नो षड्यन्त्रमा हिंड्न थाल्दछन्। किन? त्यसो गर्ने सामर्थ तिनीहरुसँग छ।
2 तिनीहरुले जमीनको चाहना गर्छन् भने तिनीहरुलाई लिन्छन्। तिनीहरुले घरहरु लिने इच्छा गर्छन भने यसलाई लिन्छन्। तिनीहरुले कुनै पनि मानिसलाई धोका दिन्छन् र उसको घर लान्छन्। तिनीहरुले एउटा मानिसलाई धोका दिन्छन् र उसको सबै चिजहरु लिनेछन्।
3 यसकारण परमप्रभु यी कुराहरु भन्नुहुन्छ, “हेर म तिमीहरुमाथि विपत्ति ल्याउने योजना बनाउँदैछु। तिमी आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैनौ। तिनीले आफैंले आफैंलाई यो कष्टमा सहायता गर्न सक्दैनौ। किन? किनभने नराम्रो समय आउँदैछ।
4 त्यस समय मानिसहरु तिमीमाथि हाँस्नेछन्। तिम्रो बिषयमा बिलापको गीत तिनीहरुले गाउँनेछन्। अनि भन्नेछन्, ‘हामी नष्ट भयौं, परमप्रभुले हाम्रा मानिसहरुको जमीन खोसेर अरू मानिसहरुलाई दिनुभयो। हो उहाँले मेरो जमीन हाम्रो शत्रुहरुलाई बाँडिदिनु भयो।
5 जब त्यो भूमि परमप्रभुका मानिसहरुको सभामा चिठ्ठाहालेर बाँडिन्छ प्रतिनिधिको रुपमा सेवा गर्ने तिम्रो कोही हुनेछैन।”‘
6 मानिसहरु भन्छन्, “तिमीले हामीलाई उपदश नदेऊ, उनीहरुले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, हामीमाथि कुनै पनि नराम्रा कुराहरु आईपर्ने छैनन्।”
7 याकूबका मानिसहरुले भन्छन्, “के परमप्रभु रिसाउनु भएको छ? के उहाँको कर्महरु यी हुन्? के धार्मिक जीवन जीउनेहरुको लागि उहाँले असल चिजहरु गर्नुहुन्न र?
8 तर अहिले मेरो आफ्नै मानिसहरु मेरो शत्रु भएका छन्, जसले आफू सुरक्षित छौं भनि सम्झन्छन्। तिमीहरु उनीहरुको खाष्टो चोर्छौ जस्तो कि तिनीहरु युद्ध बन्दीहरु हुन्।
9 मेरो मानिसका स्त्रीहरुलाई तिमीहरुले घरबाट निकालेर जानको निम्ति बिवश बनायौ,जुन घरहरु राम्रो र आरामदायी थिए तिमीले उनीहरुको सा-साना नानीहरुलाई मेरो आशिष देखि बन्चित गरायौ।
10 उठ, अनि यहाँबाट भाग! त्यो विश्राम गर्ने ठाउँ हैन। किनभने यो ठाउँ पवित्र छैन्, यो नष्ट भएर गयो, यो डरलाग्दो विनाश हो।
11 यो सम्भव हुन्छ कि एकजना झुटा-अगमवक्ता आउँछ अनि झुटो बोल्छ। उसले भन्न सक्छ, “यस्तो एउटा समय आउनेछ जब त्यहाँ प्रशस्त मद हुनेछ।” यस प्रकारका अगमवक्ता तिनीहरु चाहन्छन्।
12 हो, हे याकूब म निश्चयनै तिमीहरु सबैलाई भेला गर्नेछु। म इस्राएलका बाँचेका सबैलाई भेला पर्नेछु। म तिनीहरुलाई गोठका भेडा बाख्राहरु र र्खकका बिचमा बथान झैं एकै ठाउँमा भेलापार्नेछु। फेरि त्यो स्थान धेरै मानिसहरुको भिडले खचाखच र हल्ला- खल्ला हुनेछ।
13 तिनीहरु मध्ये एकजना आउनेछ, जसले पर्खाल भत्काएर जान सकनेछ। उसले पर्खाल भत्काएर मानिसको अघि बाटो बनाउने छ र मानिसको अघि बाटो तयार पार्नेछ। तिनीहरु मोक्ष प्राप्त गरेर त्यो शहर छोडेर जानेछन्। तब राजा तिनीहरुसँग जानेछन्। परमप्रभु मानिसहरुसँग हुनुहुनेछ।